MODA | Article Detail | သီချင်းသစ်အတွက် Selena Gomez နဲ့ Collab လုပ်သွားဖို့ရှိတဲ့ Blackpink
သီချင်းသစ်အတွက် Selena Gomez နဲ့ Collab လုပ်သွားဖို့ရှိတဲ့ Blackpink
လတ်တလော ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ August လထဲမှာ ထွက်ရှိမယ့် Blackpink ရဲ့ 2nd Single မှာ Selena Gomez ပါဝင်သွားမယ်လို့ အားလုံးက ခန့်မှန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ထဲက Single သီချင်းအသစ်အတွက် Teaser တွေ ထွက်ရှိလာပေမယ့် ဘယ် Artist နဲ့ Collaborate လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ လျှိူ့ဝှက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၂၈၊ မနေ့ကထွက်လာတဲ့ Teaser မှာတော့ Full Album အတွက် ပိုပြီး ပြည့်စုံတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါရှိတာတွေ့ရပြီး Single သီချင်းအတွက် Collaborate လုပ်မယ့် Artist က Selena ဆိုပြီး ထင်ကြေးပေးနေခဲ့တာပါ။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မေလကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Lady Gaga ရဲ့ Sour Candy မှာလည်း Blackpink က Featuring ပါဝင်ထားတာဖြစ်လို့ တကယ့်ကို ထိတ်ထိတ်ကြဲ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် တစ်ယောက်တော့ မလွဲမသွေပါဝင်မှာပါ။ ခုထွက်ရှိလာတဲ့ကောလဟာလတွေအပေါ် YG Entertainment က “သူတို့ရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကို စောင့်ပေးပါ”လို့သာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Selena နဲ့ သီချင်းကို Pre- Release မကြာခင်ထွက်ရှိလာနိုင်ပြီး Full Album ကတော့ အောက်တိုဘာ ၂ရက်လောက်မှာ ထွက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကဲ Selena ပဲလား၊ ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကို ရင်ခုန်ခုန်နဲ့ပဲ စောင့်ရတော့မှာပါ။
Blackpink Member တွေ နေ့တိုင်းနားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ Playlist က ဘာတွေလဲ။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က ဒီတစ်လောမှာပဲ Blackpink အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ချင်းစီ နားထောင်တဲ့ Playlist ကို Online Community တစ်ခုမှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးရီးယားက ထိပ်တန်း Music Portal တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Melon.com ဆိုတဲ့ Website က နေ Artist တွေ ဘာသီချင်းတွေနားထောင်လဲဆိုပြီး ဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ site မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာရှင်တွေက Recommend ပေးတဲ့ မတူညီတဲ့ Playlist တွေအများကြီးလည်း ရှိပါသေးတယ်။
Blackpink ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အားပေးတဲ့ Fan တော်တော်လေးများတာရော..သူတို့ ဘာတွေနားထောင်လဲဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာမို့ ကိုယ်နဲ့များ တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ သီချင်းလေးတွေများရှိနေမလား ခုပဲကြည့်လိုက်တော့နော်။
ပရိတ်သတ်တချိူ့ရဲ့ Comment တွေကလည်း
“သူတို့ကို International ကသီချင်းတွေ ပိုနားထောင်လောက်တယ်လို့ ထင်ထားတာ။ တကယ်လည်း အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ”
“Rose ရဲ့ Playlist က သီချင်းတွေက တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပဲ”
“သီချင်းကောင်းတွေအများကြီးပါလား။” စသဖြင့် ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
1. Jennie's Playlist
2. Lisa's Playlist
3. Jisoo's Playlist
4. Rose's Playlist
နားထောင်နေရင်းနဲ့ ခုန်ပေါက်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားမယ့် LGBTQ သီချင်းအမိုက်စားများ
ရောင်စုံ June လလေးကို Celebrate လုပ်ဖို့ Playlist
Happy Pride Moth လေးပါနော် ချစ်တို့ရေ။ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်တဲ့ Corona Virus ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Pride နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပွဲအခမ်းအနားတွေ ကြီးကြီးမားမားမရှိသေးတော့ ခါတိုင်းနှစ်တွေလို ပျော်စရာတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်က LGBTQ Community အတွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်တန့်သွားတာ၊ Celebration မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်။
အိမ်ထဲမှာပဲ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ရောင်စုံ June လလေးကို Celebrate လုပ်ဖို့ Playlist ကောင်းကောင်းတစ်ခုတော့လိုနေပါပြီ။ အောက်မှာ ပြသွားမယ့် သီချင်းတွေက အမုန်းကဲ၊ အသကုန် Shake ဖို့အတွက် ထိမိစေမှာပါ။ ခါတိုင်းကိုယ်နားထောင်နေကျ National Anthem ကကောဘာလဲ။ ပြောခဲ့ဦးနော်။ ပြီးတော့ ကွဲပြားခြားနားခြင်းက ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မကြောက်ပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်။
All Things by Betty Who
Sissy That Walk by RuPaul's
Years & Years by King
Crayons by Cupcakke